China Customized OEM Roller Slewing Bearing loo isticmaalo qaadista gaadiidka |Warshada XZWD iyo soo saarayaasha |Wanda
FOB Qiimaha:US $0.5 - 9,999 / Qayb
Awood-siinta:10000 Qeybaha/Qeybaha bishii
Xuzhou Wanda Slewing Bearing Co., Ltd.waa soo-saare xirfad leh oo dhoofiya wax-soo-saarka, gawaarida wax lagu dilo, kuwaas oo inta badan lagu dabaqo mashiinnada dekedaha, makiinadaha macdanta, mashiinnada alxanka, gawaarida dhismaha, gawaarida moodeelka ah, nidaamyada dabagalka qoraxda ee hal ama dual axis, iyo nidaamyada tamarta dabaysha yaryar iwm. Dareewalada waxay qaadi karaan xoog axial, xoog radial iyo daqiiqad foorarsi ah. Kala duwanaanshaha dhexroorka ee xajinta slewng wuxuu noqon karaa laga bilaabo 200 mm ilaa 5000 mm Wadid wadista, waxaa jira sagaal (9) cabbir oo kala duwan oo laga heli karo 3 "ilaa 25" oo leh in ka badan 60 moodooyinka si ay u buuxiyaan shuruudaha raadraaca joogtada ah iyo kuwa saxda ah labadaba ee PV, CPV iyo .. Goobaha tamarta kulaylka qoraxda. Macluumaad faahfaahsan fadlan soo deji buug-yarahayada.
1.Professional alaabta naqshadeynta iyo xisaabinta culeyska;
2.Made leh qalab tayo sare leh si loo hubiyo sifooyinka farsamada
3.Total maaraynta tayada alaabta, hababka wax soo saarka ilaa alaabta la dhammeeyey;
4. Horumarka joogtada ah ee xoogga dhameystiran, 2 warshadood oo shaqeynaya iyo 1 warshad oo dhismo ah oo leh in ka badan 230 shaqaale ah, oo bixiya xayndaabyo 5000sets / bishii, slewing drives 1000sets / bishii.
5.Awoodo farsamo oo xoog leh iyo R & D oo leh koox farsamo oo khibrad leh iyo iskaashiga Jaamacadda Shiinaha ee Macdanta iyo Teknolojiyada, Jaamacadda Waqooyiga-galbeed ee Polytechnical iyo Jaamacadda Tsinghua.
6.Rich waayo-aragnimo dhoofinta, alaabta waxaa loo dhoofiyaa in ka badan 60 dal iyo gobollada.
7. Soo-iibiyaha xirfadda leh ee wax dila badda.
Hore: XZWD|ODM giraanta wax lagu gooyo ee la habeeyay WD-061.20.1094F nooca khafiifka ah
Xiga: XZWD|Xidhadaha wax lagu dhufto ee fudud ee mashiinka wax lagu duubo
rullaluistu go'an wax lagu dilayo
Dharka wax lagu laayo ee la habeeyey
OED dilaaga ah
Wax qabad sax ah
Diidmo yar yar